Ma jirtaa Maalin qaranimo dal leyey oo la badalay dabaal degeeda inaga ka hor gaar ahaan Waddamada islaam ka oo ay ku hagaagtay Ramdaantu? | Somaliland Post
Home Maqaallo Ma jirtaa Maalin qaranimo dal leyey oo la badalay dabaal degeeda...
Ku.Gudida qabanqabada 18 May. W/Q: Anwar M Cabdalla
Ma jirtaa Malin qaranimo dal leyey oo la badalay dabaal degeeda inaga ka hor gaarahaan wadamada islaam ka oo ay ku hagaagtay Ramdaantu ?
Waxaan u sheegaya la taliyaasha Madaxweynaha iyo inta ka ag dhaw waa qalad dal malintii ay lahyeen la raro malin kale waa mucjiso miyay nu ka noqonay somaliland kii hadaynu malintii aynu isla qadanay ee 18 may aynu badali karo macanaheedu waa qodob dastuuri ah oo la jabiyey !
Maha wax la aqabli karo calan dalkiisi jooga oo malintii dhalshadiisa malin kale loo badala maxa ku jaban haday ramadaan tahay waa suaal , waxa dhici in nin waliba malinta uu doono u dabaal degi doono .
Waxa jir qurba jooga duruufo ku gadaaman oon mararka qaarkood suragl u noqon inay 18 may laftada ay dabaal degan sabab too ah calanku dalkisii ma joogo iyaga oo ku beeganay malinta shaqada ay fasaxa ka yihiin ee ugu dhaw 18 may marmar waxay u dabaal degan 21 , ama 17 ama 15 oo sabab tu tahay 18 ka oo ku hagaga malin shaqo , hadaba calanku miyanu wadankisii joogin haday ramdaan ku hagagto iyo hadii wax kasta dhacaan xata hadii masiibo qaran dhacdo in dad ka loo sheego sababta uun mooyee malinta xigta iyo wiiga xiga toona loma dabaal degi karo.
Bal arintan dastuur jabinta ah dib ha loo eego hadad doonto waxa ku furan inaad tira wa Ramadan waxanu ku badalay in dalka loo duceeyo intasa ka Mudan inaad tira 15 bisha ayan u dabaal degayaa qabanaya xafladii 18 may .
I am sorry in dawladenu anay fahmi karin qiimaha ay leeday 18 may oo ay u qateen inay malin tay doonan loo dabal degi karo .
Ma dhici karto mana qabo in dastuur ka sidi la doono loo dhigi karo .cidan ka qaranka nasi hadad doonto lakiin sabab ma noqon karto waa ramdaan .
Waddamada islaamku ma badalan malinta qaranimadadoda jawaabteedii waa Maya Maya Maya
SLpost - Modified date: November 15, 2018